Tongasoa Eto Amin’ny Tontolon’ny Bilaogy Kiorda · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Novambra 2017 6:02 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Septambra 2005 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Mampiady hevitra hatrany ny resaka momba an'i Kiordistana (na eo amin'ny sehatra ara-politika na idealy). Na dia tsy misy antoko politika aza ao Kiordistana, ny lohahevitra amin'ny fananganana tanindrazana ho an'ny Kiorda (vondrona ara-poko lehibe indrindra manerantany tsy manana firenena azy manokana) no mbola tanjona voalohany ara-politikan'ny ankamaroan'ny vahoaka Kiorda. Tena manankarena ny tantara, ny kolontsaina ary ny fiteny kiorda ary maro amin'ireo bilaogera Kiorda no nanao izany ho iraka ampanaovina azy ireo mba hampiely vaovao betsaka araka izay azo atao mikasika ny Kiorda ho an'ny mpihaino (mpamaky) betsaka. Ny firenena manana vahoaka maro ao Kiorda sy/na manana faritra tondroina ho Kiordistana dia: Iran, Iraka, Syria sy Torkia. Monina any avaratr'i Iràka ny ankamaroan'ny bilaogera izay mibilaogy avy any Kiordistan, na izany aza, efa miha-mahazo vahana hatrany eo amin'ny tontolon'ny bilaogy ny hetsika am-pielezana. Ny tanjon'ity famoahan-dahatsoratra isan-kerinandro ity dia ny hampidirana ny mpamaky ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Kiorda ary hanome vaovao farany mikasika ireo olana atrehina izay resahana sy iadian-kevitra ankehitriny ao anatin'ny bilaogin'izy ireo.
Angamba ny tranonkala tsara indrindra ho fampahafantarana ny tontolon'ny bilaogy Kiorda dia ny Sendikan'ny Bilaogera Kurdistan, izay nahavita nampivondrona ireo feo maro ho amin'ny toerana iray ho fanohanana ny vahoaka Kiorda. Nankalaza vao haingana ny tsingerintaona voalohany niorenanany, niresaka lohahevitra samihafa ny Kurdistan Bloggers Union, manomboka amin'ny tantaran'ny Kiorda, ny zava-mitranga ankehitriny ao amin'ny faritra, hatramin'ireo lohahevitra mahavariana kokoa toy ny fanakambanana kolontsaina malaza amin'ny kolontsaina Kiorda. Nitarika tamin'ny famoronana Tranonkalam-baovao sy Forum KBU, izay ampiasaina hiresahana ny zavatra rehetra Kiorda mihitsy aza ny fanohanan'ny mpamaky. Ampirisihana ny mamaky ireo rohy ao amin'ity blaogy ity satria iray amin'ireo lisitra feno indrindra amin'ny bilaogy Kiorda izay voasoratra amin'ny teny Anglisy izany. Nifantoka tamin'ny hetsika nataon'ireo mpikambana samihafa ny hetsika vao haingana tao amin'ity blaogy ity. Vladimir, mpanao gazety Holandey, nanasongadina vao haingana ny ezaka nataony tamin'ny raharaha Kiorda ary nisy ny fampahafantarana ny blaoginy vaovao From Holland to Kurdistan (avy any Holandy ka hatrany Kiordistana), izay mifantoka amin'ny tantaran'ny vahoaka Kiorda. Piling, mpikambana iray hafa ao amin'ny Kurdistan Bloggers Union kosa nanome sary misy ny Tranomboky ao amin'ny Ivon-toerana Kiorda ao Paris izay toerana iasàny.
Amin'ny lafiny ara-lohahevitra, azo zaraina ho sehatra votoaty telo lehibe ny Bilaogy Kiorda: ny Kolontsaina, ny Tantara ary ny Politika. Omena amin'ny lahatsoratra amin'ny herinandro manaraka ny fanazavana amin'ny antsipiriany momba ireo sehatra ireo. Na izany aza, ao anatin'ny tontolon'ny bilaogy Kiorda, zava-dehibe ny manamarika fa nandritra ny fotoanan'ny krizy, nanaporofo tamim-pahagagana ireo bilaogera fa haingana be izy ireo namaly ireo olana ary, indraindray, mameno ny banga navelan'ny fandrakofan'ny fampahalalam-baovao. Ohatra iray ny herisetra Jolay 2005 nihatra tamin'ireo Kiorda tao amin'ny sisintanin'i Iran, indrindra indrindra tao amin'ny faritanin'i Mahabad. Raha kely na tsy misy mihitsy ny vaovao hita mikasika ny zava-mitranga, nanangana tranonkala natokana indrindra ho fanomezam-baovao momba ny zava-nitranga tao Mahabab ireo bilaogera Kiorda. Ity fahafahana (na dia mbola zazakely) nanangana fikatrohana eny ifotony ao amin'ny tontolon'ny bilaogy ity no mariky ny hery ao anatin'ny bilaogera Kiorda ary tokony hahaliana mba hanaraha-maso ny fampandrosoana ara-politika hitranga amin'ny andro, volana sy taona maro ho avy.